people Nepal » तेल चोर्न कडाइ गरिएपछि ट्यांकर चालकको हडताल! अहिले व्यक्तिपिच्छे ट्यांकर चालक हुने र सबैजसो चाकलले आफ्नै ट्यांकरबाट ढुवानी गरिरहेका छन् । तेल चोर्न कडाइ गरिएपछि ट्यांकर चालकको हडताल! अहिले व्यक्तिपिच्छे ट्यांकर चालक हुने र सबैजसो चाकलले आफ्नै ट्यांकरबाट ढुवानी गरिरहेका छन् । – people Nepal
तेल चोर्न कडाइ गरिएपछि ट्यांकर चालकको हडताल! अहिले व्यक्तिपिच्छे ट्यांकर चालक हुने र सबैजसो चाकलले आफ्नै ट्यांकरबाट ढुवानी गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । ढुवानी व्यवसायी र ट्यांकर चालकको निजी स्वार्थ प्रेरित हडतालका कारण उपत्यकामा इन्धन अभाव भएको छ । चालकले गरेको एकदिने हडतालले तीन दिनदेखि इन्धन वितरण प्रभावित हुँदा उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।ट्यांकर चालकले आयल निगमको ढुवानी विनियमालीमा भएको संशोधनलाई लिएर शुक्रबार इन्धन लोड–अनलोड र ढुवानी ठप्प पारेका थिए । सोही कारण शुक्रबार, शनिबार र आइतबार पम्पमा लामो लाइन लागेको छ । ट्यांकर चालकले विभिन्न १५ बुँदे माग निगमसमक्ष राखेका छन् ।
तेल चोर्न कडाइ गरिएपछि हडताल
आयल निगमले ढुवानी विनियमावली संशोधन गर्दै एउटा ट्यांकरबाट २ सय लिटरभन्दा बढी तेल कम देखिए चालकले प्रचलित मूल्यको दोब्बर बढी रकम जरिवानाबापत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निगमले बीचबाटोमा हुने तेल चोरी नियन्त्रण गर्न विनियमावली कडा बनाएको हो ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।तर, चालकले यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले प्राविधिक नोक्सानी हुने भएकाले तोकिएको लक्ष्यभन्दा कम भए परिमाणबराबरको रकम प्रचलित मूल्यअनुसार मात्रै भुक्तानी गर्न सक्ने जनाएका छन् । त्यस्तै निगमले आवश्यकताका आधारमा ट्यांकर थप गर्दा एउटा व्यावसायीले कम्तीमा ५ वटा ट्यांकर चलाउनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । चालकले यो मापदण्डको पनि विरोध गरेका छन् ।
अहिले व्यक्तिपिच्छे ट्यांकर चालक हुने र सबैजसो चाकलले आफ्नै ट्यांकरबाट ढुवानी गरिरहेका छन् । धेरै ढुवानी व्यवसायी हुँदा बारम्बार समस्या झेलेको निगमले थोरै व्यवसायीसँग धेरै ट्यांकर भाडामा लिएर सञ्चालन गर्न खोजेको हो । ट्यांकर साहुसमेत रहेका चालकले एउटा व्यक्तिले एउटा ट्यांकर पनि भाडामा चलाउन पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।उनीहरूले माग सम्बोधन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले शुक्रबार एक दिन ढुवानी ठप्प पारेपछि निगमले सोमबार चालकलाई बोलाएर छलफल गर्दै छ ।
भण्डारणमा समस्या छैन
आयल निगमका वितरण विभाग प्रमुख सीताराम पोख्रेलका अनुसार उपत्यकालगायत मुलुकभर वितरण गर्न इन्धन भण्डारणमा कुनै समस्या छैन । ‘आइतबार माग धेरै हुने आँकलन भइसकेको थियो, त्यसैले अन्य समयको भन्दा दोब्बर वितरण गरिएको छ,’ उनले भने ।आइतबार उपत्यकामा पेट्रोल ८ लाख लिटर र डिजल ७ लाख ५० हजार लिटर वितरण गरिएको उनले बताए । शनिबार सरकारी पम्पलाई २ लाख लिटर पेट्रोल बाँडिएको थियो । सोमबार मागअनुसार वितरण गर्न तयार भएर बसेको उनले जानकारी दिए ।